Ugaaska Mudulood oo qandaraasyadii Gobolka gacanta loo galiyay iyo kireynta Guryo been abuur ah (Cadeymo) - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Ugaaska Mudulood oo qandaraasyadii Gobolka gacanta loo galiyay iyo kireynta Guryo been...
Ugaaska Mudulood oo qandaraasyadii Gobolka gacanta loo galiyay iyo kireynta Guryo been abuur ah (Cadeymo)
Musaqa ka jira Gobolka Banadir ayaa faraha ka sii baxaya maalinba maalinta ka danbeysa waxaana uu hadda faraha la galay Ugaaska beesha Abgaal Ugaas Maxamuud Cali Ugaas.
Ilaa iyo xiligii uu maamulka Gobolka Banadir la wareegay Cabdiraxman Cusman Yarisow waxaa ay hantida Gobolka Banadir noqotay mid si toos ah iyo si dadbanba loo boobay iyada oo ayan jrin wax isla xisaabtan ah.
Hadaba waxaa nasiib xumo ah in mid ka mid ha salaadiinta Beesha Abgaal, Ugaas Maxamuud Cali Ugaas uu ku dhexmilmay maamulka Gobolka Banaadir qaybna uu ka yahay dhaca ku socda hantida shacabka ku dhaqan Giobolka Banaadir uuna yahay madaxa dhaqanka, oo halka uu badbaadin lahaa hantidooda uu horjooge ka noqday boobka hantida shacabka uu Ugaaska u yahay.
Hogaanka Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa uu caado ka dhigtay in musaqa uu soo galiyo cidkastaa oo uu uga baqayo in ay ka hadasho musuq-maasuqa ka jira xukuumadiisa. Qorshahan ayaa keenaya in lawaayo cid karaamo iyo sharaf ku leh shacabka dhexdiisa oo ka hortimaada ama ka hadasha musaqa iyo boobka lagu hayo hantida shacabka ku dhaqan Gobolka Banadir.
Hadaba Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa noqday shaqsiga ugu saamiga badan lacagaha sida joogtada looga bixiyo qasnadaha Gobolka Banadir.
MOL iyo qaar ka tirsan wariyayaal ka howl-gala idaacadaha ka shaqeeya magaalada Muqadishu ayaa in mudo ah waxa ay wadeen baaritaano la xiriira qaabka loo naasnuujinayo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas taas oo keentay in Ugaasku si indha la’aan ah u taageero siyaasadaha Ra’iisal Wasaare Kheyre iyo hogaanka Cabdiraxaman Yarisow.
Baaritaanadaas oo wata cadeymo ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in Ugaaska ay ka soo gasho qasnada Gobolka Banadir lacago kor u dhaafay $62,000 bishii taas oo inteeda badan ka timaado qandaraasyo gaar ah oo la siiyay shirkado uu isaga leeyahay ama qaar kale oo uu ku qortay magacyo beenabuur ah.
Qaybaha kala duwan ee lacagta uu ka qaato Maxamuud Cali Ugaas waxaa ka mida;
Waxaa Maamulka Gobolka Baandir uu ka kireeyay waqooyiga magaalada Muqadishu labo guri oo waaweyn, labaadaan guri ayaa Eng Yarisow waxa ku magacaabay guryaha Maritida Gobolka Banadir taas oo lagu sheegay in martida u timaado Gobolka Banadir la jiifiyo. Shaqaalaha iyo shacabka Gobolka Baadir waa ay og yihiin in ayan jirin marti Goobolka Banadir u timaada oo la jiifiyo guryahaas. Ujeedada rasmiga ah ee laga lahaa kireeynta guryahaas oo uu shaqsiyan leeyahay ugaaska ayaa ah in Ugaas Maxamuud Cali Ugaas uu ku qaato lacag joogta ah. Labada guri ka mida ayaa ah ayaan ka fogaynin Mariinada halka midka kale uu ku yaalo degmada Cabdicasiis ee Gobolka Bandair. Guryahaas ayaa lagu qaata bil kastaa aduun gaaraya $18,000 .
Shirkado uu Ugaas Maxamuud sameeysaty ayaa waxaa qandaraasyo lagu siiyay qeybo ka mida bixinta Shidaalka Gobolka Banadir. Shirkada Ugaas Maxamuud ayaa loo dhaafay in ay go’aan ka gaaro lacagta lagu soo dalacayo Gobolka Banadir. Ma jirto cid dabagal ku sameeysa in shidaalkaas la bixiyay iyo in kale, cida la siiyay iyo gawaarida Gobolka Banadir ee lagu shubay shidaalka.
Ugaaska waxa uu wali lacag ka qaataa lacagaha laga soo qaado gawaarida ka howlgasha magaalada Muqadishu, isaga oo shirkadiisa (SmART) lagu siiyo lacag gaar oo la xiriirta ururinta lacgacta gawaarida laga qaado. Shirkadaan oo horay shaqo joojin loogu sameeyay ayaa hadana dib loo soo nooleeyay iyada oo shaqooyin hor leh qandaraasyo lagu siiyay.
Gudoboomiyaha Gobolka Banadir ayaa Ugaaska u qaray lacag lagu magacaabay “Kicinta iyo abaabulka bulshada ” taas oo si toos ah loogu qoray ugaaska iyada oo formka lacagta lagu bixiyo lagu qoray magacyo been abuur ah.
Inkstoo degeenka Garasbaaleey uu xaq u lahaa in laga dhigo degmo isla markaana uu ka mid noqdo degmooyinka Gobolka Banadir hadana aqoonsashada deegaankaas waxaa ka danbeeyay Ugaas Maxamud Cali Ugaas. Ugaaska ayaa dhowr bilood ka hor waxa uu deegaankaas Garsbaaleey ka iibsaday 92 boosas kuwaas ku qoran magaciisa rasmiga ah. Sidoo kale waxa jira ganacsato kale oo Ugaasku dalaal ka ahaa kuwaas dhul fara badan ka iibsaday deegaankaas. Dhulalkaas ayaa shacabka deegaanka oo ah dad masaakiin ah looga badhashay lacag aad u yar marka loo fiirsho qiimaha uu maanta ka jooga suuga kala iibsashada dhulalka. Hadabau u magacaabista deegaanka Garasbaaleey degmo ka tirsan Gobolka Banadir waxa ay saacado gudahood kor u qaaday qiimaha dhulkii Ugaaska iyo saaxibadiisa ay ku iibsadeen dhowr bilood ka hor.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo dhaqaalo badan ka soo ogolo Gobolka Banadir ayaa bishii Nofeenbar ee sanadkii tagay waxa uu magaalada Muqadishu ka iibsaday labo guro oo waaweyn , Guri waxa uu ku yaalaa degamada Kaaraan halka guriga kale uu ku yaalo degmada Hodon ee Gobolka Banadir . Labadaas guri ayaa waxa ay ku kaceen lacag gaareysa $870,000 (sideed boqo iyo todobaatan kun) oo ah lacagacta Mareykanka. Labadaan guri ayaa waxaa lagu diiwaan galiyay gobolka Banadir iyo nootaayada Muumin.
Ra’iisal Wasaare Xassan Cali Kheyre oo doonayo in ay iibsado karaamada iyo sharafta beelaha ku dhaqan magalada Muqadshu ayaa u muuqda in uu yahay nin ay ka go’an tahay in musuqa uu isaga ku dhex jirio uu si buuxda u soo galiyo salaadiinta beelaha. Gaar ahaan Salaadiinta, ugaasyada aan lahaynin dareenka diineed , mid dhaqan amaba mid qadiyad ku dhisanba.
MOL waxaa ay diyaar u tahay in ay hay’adaha ay quseeyso baaritaanka musuqa ka jira dalka ay la wadaagto sawiro, nuqulo dhulalka la iibiyay, qandaraasyada sida sharci darada ah loo bixiyay.
Dhanka kale waxaa lama huraan ah in Hanti Dhowrka Qaranka uu bilaabo baaritaan la xiiriira qandaraasyada uu Gobolka Banadir bixiyo iyo qaababka loo bixiyayaba , Gaar ahaan waxaan ku adkeynaynaa Hanti dhowrk Qaranka in baartiaan buuxa lagu sameeyo qandaraasyada gaar ah ee la siiyaya Ugaas Maxamuud Cali Ugaas. Waxaa kalr oo lama huraan ah in iyadana baaritaan lagu sameeyo guryaha u kireysan maamulka Gobolka Banadir, cid degan, lacagaha lagu bixiyo iyo qaabka lacagahaas loo bixiyaba.
Dhanka kale waxaan ugu baaqaynaa Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka soo jeedo saldano karaamo iyo sharaf ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis gaar ahaan beesha uu ka dhashay ee Mudulood in uu banaanka yimaado iskana difaaco eedeynta culus ee kor ku xusan, waxaan u haynaa caddeeymo aan indiin soo bandhigi doono, balse waxaay waxay MOL kula talineysaa in Maxamud Cali Ugaas uu Ilaahay u noqdo iskana dhaafo boobka xaaraanta ah iyadoo dadkii uu dhaqanka u ahaa aay qaarna gaajo dileyso qaarna cadowga Shabaab ay dilayaan maalin walba.
MOL waxa ay qorshaynaysaa in ay soo bandhigto cadeeymo ay la wadaageen qaar ka mida shaqaalaha Gobolka Banadir oo aad uga xun boobka ku socda hantida shacabka iyo tan qaranka. Shaqaalaha ayaa ay aad u dhibtay in iyada oo kumanaan qof oo ku dhaqan Gobolka Banadir ay yihiin hoy la’aan iyo cuno la’aan hadana Gudoomiye Cabdiraxman Yariisow uu sida uu doono ugu tagrifalo canshuurtii laga soo aruuriyay shacabkaas dhibanaha ah.
Su’aasha la is weydiinaya ayaa ah Madaxweyne Farmaajo maxaa talaabo ah oo oo ku qaadayaa musuqa baahay ee ka jira Gobolka Banadir, kaas oo dib ugu soo noqon doono isaga iyo dowladiisa? Mise sidii caadada ahayd wuxuu dhihi doonaa “Ma ogeyn waxa ka dhacay Maamulka Gobolka Banaadir”